Ya bụ mmemme bụ nke weere ọnọdụ n'obi eze ọdịnala obodo ahụ, bụ Igwe Ben Emeka. Igwe Emeka na nwunye ya bụ lọọlọ Ocheze Chinwe, tinyere ndị ichie igwe nọrọ na mmemme ahụ wee gbaa egwu ịgbaeze na uhie, ebe a gbazịkwara ọtụtụ egwu ọdịnala dị iche iche.
Ya Igwe site na nnọnyere ndị ichie nọrọ n'oge ahụ wee mee omenala ịwa ji, nke ọ nọ na ya wee warịe otu mba ji ụzọ atọ, nke nọchitere anya mpaghara atọ mejupụtara obodo ahụ, bụ: mpaghara Ifite, mpaghara Ikenga na mpaghara Ezi ma nyefee ya n'aka ndị isi mpaghara atọ ahụ. A nọzịkwara n'oge ahụ wee kesaara ndị bịara ebe ji ahụrụ ahụ, nke ejiri ụkpaka, ụtazị na mmanụ nri na-akwọ mụrị mụrị wee hazie, tinyere mmanya ngwọ na nkwụ elu e jiri wee gbanyere ya ụgbọ nwamkpi.
Igwe Emeka kọwara mmemme iri ji ọhụụ dịka oge iji kele Chineke n'ihi owuwe ihe ubi, sị na ndị Ogidi bụ ndị e jiri ọrụ ugbo mara, ma sịkwazie na obi dị ya ụtọ etu ụmụafọ obodo ahụ siri nuputa n'igwè isonye na ya bụ mmemme pụrụ iche.
N'okwu nke ya, onyeisi ndị uwe ojii na steeti Anambra bụ maazị Garba Umar na onye 'Inspector General' ndị uwe ojii lagoro ezumike nka bụ maazị Paul Okafor kọwara na ezi nchekwa tọrọ atọ na nnukwu owuwe ihe ubi e nwere n'obodo ahụ bụ n'ihi ezi mbọ pụrụ iche ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ gbagoro na ngalaba nchekwa, ngalaba ọrụ ugbo na ngalaba dị iche iche na steeti ahụ.
Na ntụnye nke ya, kọmishịọna na-ahu maka agụm akwụkwọ na steeti ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha kọwara mmemme iri ji ọhụụ dịka oge e ji e gosiopụta ihe dị iche e jiri mara ndị Igbo, ma keleziekwa Igwe Emeka maka mpụta ya na nsonyesi ike ya n'ihe dị iche iche a na-eme.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere ọkamụta Ọgụgụa Ikpeze, bụ otu n'ime ndị ichie igwe; 'Chief' Chris Udealor, onye isi otu 'Committee of Friends Nteje na steeti Anambra, Igwe Ezenebo III nke Akwaeze, 'Chief Innocent Edozie' tinyere ndị ọzọ.